Oday dhaqameedkii 2aad oo ka qeyb ahaa Dhismaha Barlamaanka Soomaaliya oo kooxo hubeysan Muqisho ku dileen – idalenews.com
Allah ha u naxariistee waxaa galabta koox hubeysan oo aan heybtooda la sheegin ay magaalada Muqdisho ku dileen mid ka mid ahaa duubabkii Soomaaliyeed ee ka qeyb ahaa 135 xubnood ee soo xuley barlamaanka Soomaaliyeed isla markaasna ansixiyey Dastuurka KMG ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Yuusuf “Codey”.
Odey dhaqameedkaan ayaa lagu dilay xaafada Nasteexo ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho halkaasoo la sheegay in uu deganaa nabadoonka, waxa la sheegey inuu ka soo jeedey gobalada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan Hiiraan.
Goobjoogayaal ayaa Idae News u sheegay in ragga toogtay nabadoonka ay weerareen wax yar kadib markii uu baabuurkii uu watay uu ku xareystay meel baabuurta la dhigto, iyagoo ugu horeyn ka qaatey bistoolad uu isku ilaalinaayey ka dibna toogtey, qowlaysatadii dilkaas geysateyna la sheegey iney isla markiiba ka baxsadeen goobta uu dilka ka dhacay.
Ma jirin wax ciidan ah oo goobta soo gaaray iyadoo ay xusid mudan tahay in xaafada Nasteexo ee degmada Wadajir ay ka mid tahay goobaha ay ku suganyihiin maleeshiyaad beeleedka dhowaan laga qaaday isbaarooyinkii yaallay magaalada Muqdisho.
Dilkaani ayaa noqonaaya kii 2aad oo loo geyso oday dhaqameedyadii Soomaaliyeed oo soo xuley xubnaha barlamaanka dowlada Federaalka Soomaaliyeed, iyadoo bishii la November 9keedii la diley Malaaq Isaaq Ibraahim “”Isaaq Uus” oo ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle oo wax ka xuley xubnaha barlamaanka, walow inta badan saraakiisha booliiska marka ay dilalka dhacaan ay sheegaan inay baaritaan wadaan.
Sidoo kale waxaa toddobaadkii hore dil ka badbaaday nabadoon saddexaad oo gurigiisa weerar lagu qaaday inkastoo ay u suurtagashay inuu ka baxsado.
Dilalka qorsheysan ayaa inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho oo xarun u ah dowlada Somalia iyo ciidanka AMISON, kuwaasoo qaar ka mid ah lagu eedeeyo ama ay sheegtaan kooxda al Shabaabka, halka kuwa kale la sheegaayo in siyaasad ku lug leeyihiin oo aan cidna sheegan, wax loo soo qabtaana ilaa iyo hadda aan jirin.